Zidane Oo Hadlay Inuu Bale Kusoo Bilaabayo Kulanka Juve Ee CL %
Tababaraha kooxda kubada cagta Real Madrid, ninka lagu magacaabo Zidane oo warbaahinta la hadlay kadib ciyaarii ay xalay 3-0 ay uga badiyeen Las Palmas ayaa wuxuu sheegay in guushaan ay ahayd mid aysan ku keenin si sahal ah.
Gareth oo labo gool dhaliyay oo mid uu ahaa Rigoore iyo Karim Banzema oo gool Rigoore ahaa dhaliyay isana ayaa Real Madrid ka saaciday inay Hal dhibic ay ujirsadaan Atletico Madrid, kuwaasoo maanta iyagana kulan dheelaya.
Sikastaba, guushaan ayaa waxay Madrid ugu soo aadeysaa iyadoo ay la balansan tahay Isbuucaan Juventus si ay ula dheesho kulan ka tirsan Champions League, gaara ahaan wareegiisa Sideed dhamaadka oo ay isku beegan yihiin.
Zidane oo wax laga weydiiyay kulankaan ayaa wuxuu sheegay in kooxdiisa ay hada ku jirto bandhig wanaagsan, islamarkaana waxa kaliya ee uu rajaynayo ay tahay inay sii wataan guulasha ay gaareyso, sida ay uga badiyeen Palmas.
“Las Palmas waa ay ubaahneed saddex dhibcood, hadii ay dhalin lahayd gool dhibaato ayey nagu ahaan ahayd, sidaas darteeda guusha ma aysan ku imaan si fudud, sidaas darteeda dhamaan kulamada nagu soo wajahan sidaas ayaan sameyn doonaa,” ayuu yiri.
“15 maalmood oo nasiino ah kadib waxaa noo bilaaban doonta shaqadeena, waxaana dooneynaa inaan uqabsano sida ugu macquulsan uguna fiican, waxaana diyaar unahay inaan sameyn wayno wax walba oo aan awoodno.
“Bale wuxuu sameeyay wax wanaagsan, waana ku farax-sanahay wax qabadkiisa, marka waan arki doonaa hadii uu dheelo kulanka Turin,” ayuu ku jawaabay Zidane mar la su’aalay bandhigii uu Bale sameeyay kulankaan iyo labadiisa gool.
Ciyaaryahan Nacho Fernandez oo Real Madrid udheela ayaa kulankaan dhaawac uu kasoo gaaray, waana mid dhabar jab ku noqon karta Real, maadaama uu uyahay laacib muhiim ah, inkastoo hadana bedalkiisa la heli karo, hadana Zidane ayaa xaaladiisa ka waramay.
“Nacho ma uusan fiicneen, waxaana uu ahaa mid aanan dareemin wax raaxo ah, waan arki doonaa hadii uu berri diyaar nala noqdo, sidaas darteeda, waxaa garoonka looga saaray xaalad taxadir ah,” ayuu kusoo koobay Zidane.
Ugu dambeyn, hogaamiyaha Los Blancos, oo wax laga weydiiyay dhaleeceyn ay ujeedinayeen qaar kamid ah jamaahiirta kubada cagta Gonzalo Higuain, kadib markii dalkiisa looga badiyay 6-1 kulankii Spain, hadana Zidane ayaa daafacay wiilkaan.
“Dadka xiligaan joogo waxay sheegi karaan oo ay dhihi karaan waxay doonan, maxaa yeelay kaliya waxaad sameyn kartaa inaan dhageysto, waxaa laga yaabaa inay aniga iigu dhacday, marka dadka ha iska dhahaan waxay doonan,” ayuu kusoo xiray hadalkiisa.
BaleCLJuveJuventus vs Real MadridZidane